नागरिकताको श्रीमान |
प्रकाशित मिति :2017-12-22 11:19:49
काठमाडौं । ‘सोचे जस्तो हुन्न, रोजे जस्तो हुन्न, रहर बनि मन उड्यो, किन होला…?’ चलचित्र ‘रहर’ को यो गित र ‘सोचे जस्तो हुन्न जीवन’ गायिका तारादेवीको गीतले भनेझै जिन्दगी सोचे जस्तो कहाँ छ र ? कति दुःख र संघर्षहरु झेल्नुपर्छ ।
आफ्नो जीवन यस्तै दुःख र संघर्षका पहाड सम्झिन्छिन् नुवाकोटकी सोनिया तामाङ । वर्षले २७ पुगीन् उनी । ललितपुरको एउटा कार्यक्रममा उनीसँग भेट्ने मौका जुर्यो ।
उनी काठमाडौंको एउटा संस्थाको प्रतिनिधित्व गरि आएकी थिइन् । कार्यक्रममा उनी जस्ता १० जना महिलाले आफ्नो भोगाई सुनाइरहेका थिए । कोहि श्रीमानबाट पीडित थिए, कोही सासु ससुराबाट पीडित, त कोही आफन्तबाटै ।
आफ्ना पीडा सुनाउँदा महिलाहरु घुक्कघुक्क रोइरहेका थिए । शब्द रोकिरहेको थिएन । उनीहरुको पीडाले सहभागि सबैको आँखा रसाएका थिए । सोनियाको जीवन भोगाइ पनि कुनै चलचित्रको वियोगात्मक कथा भन्दा कम लागेन ।
थप बुझ्ने जिज्ञासले ठिक एक महिनापछि मैले उनीसँग भेटे । उनको भोगाई र पीडा नलेखी बस्नै सकिन । वि.स. २०७३ सालको कुरा । सोनिया एसएलसीपछि कम्प्युटर सिक्ने उदेश्यले काठमाडौं आएकी थिइन् । काठमाडौं धेरै नेपालीको भविष्य खोजे, सपनाको शहर हो । तर एसएलसीमा व्याक लागेपछि उनको उच्च शिक्षा पढ्ने सपना अधुरै रह्यो । परिवारले पनि पढाईमा भन्दा विवाह गरिदिन जोड गरे ।
त्यसबेला उनी १९ वर्षकी थिइन् । ३ दिदीबहिनी र १ भाई मध्येकी जेठी छोरी । बाबु रोजगारका लागि खाडी मुलुकतिर थिए । गुरुङ, तामाङ समुदायमा मामा चेलि, फूपू चोला विहेबारीका लागि हक लाग्छ । त्यसकै आधारमा सोनियालाई विहे नै नगरि मामाको छोरालाई श्रीमान कायम गरि नागरिकता बनाइदिए ।
गाउँमै ८-९ पढेर कतार गएका मामाका छोरा त्यही साल फर्केका थिए । गाउँमा फलानाको बुढी भनेर खुबै जिस्काउँथे सोनियालाई । उनलाई भने इच्छा थिएन । त्यसैले छोरी अन्तै विवाह गर्लि कि भन्ने सोचेर आमाको करमा मामाको छोराको नामबाट नागरिकता बनाइदिएका थिए । नागरिकतामा श्रीमान भएको केटो फेरि विदेश फर्किए ।
सोनिया त्यहि नागरिकता बोकेर ०६४ मा काठमाडौं छिरिन । त्यही नागरिकता देखाउँदै उनले भनिन् –‘थाहा छैन यो मान्छे कहाँ छ । तर प्रमाणले मेरो श्रीमान भन्छ के गर्नु ।’ काठमाडौंमा आफन्तकोमा बसेर कम्प्युटर सिक्न थालिन् । सामान्य परिवारकी सोनियालाई जीवन गुजरा गर्न गाह्रो हुन थाल्यो । दोहोरीसाँझमा काम गर्ने सानीआमाको सहयोगमा उनले पनि दोहोरीमा काम थालिन् ।
गंगबु नजिकैको शान्ति दोहोरी साँझमा वेटरको काम गर्न थालिन् । राति १२-१ बजेसम्म खटिनुपर्ने । त्यहाँ ६ महिना जति वेटरको काम गरेपछि उनी धौलागिरि दोहोरी साँझमा काम गर्न थालिन् ।
दोहोरी साँझमा अनेकौ मान्छे आउँथे । गुण्डाहरु पनि आउथे । त्यहाँ आउने मध्येका एउटा केटाले उनलाई खुब मन पराउँदा रहेछन् । उनी भन्छिन्–‘मलाई मन पराउने व्यक्ति चरी, साजन भन्ने डनका केटाहरु थिए ।’ त्यो २०६६ बैशाख महिनाको कुरा हो ।
उनी सम्झदै भन्छिन्– ‘साँझ पर्न लागेको थियो । त्यो दिन दोहोरी साँझमा म होस्टेज (पाहुना सत्कार)मा परेको थियो । ड्रेसमै थिए । दोहोरी साँझका साहुहरु आएका थिएनन् । ऊ लगायत ३ जना केटाहरु आएर मलाई ट्याक्सिमा हालेर लिएर गए । कसलाई भन्नु । कराए । तर कसैले केही गर्न सकेनन् । थाहा थिएन् कहाँ लैजादैँ छन् भनेर ।’
पछि मात्र थाहा भयो, त्यो ठाउँ धुलिखेल रहेछ । त्यहाँ उनलाई एक महिना होटेलमै राखियो । मौन मुद्रामा उनी भन्छिन्–‘बाहिर निस्कन दिदैँनथ्यो । उसैले मेरो सानिआमालाई फोन गरेर विहे गरी मसँग भनेको थियो । ऊ बाहिर निस्कियो भने मलाई हात बाँधेर, मुख थुनेर राख्दिन्थ्यो । मलाई लागेको थियो, मलाई म बेचिसके ।’
एक महिनापछि त्यहाँबाट मलाई जवरजस्ती राति ट्याक्सीमा हालेर पोखरा पु¥यायो । पोखरामा पनि होटेलमै राख्यो । बाहिर जान दिदैँनथ्यो । होटेलमा रहँदा पिट्ने, जबरजस्ती गर्ने गथ्र्यो । ’ मेरो हातमा मोबाइल थिएन् । उनले मलाई विहे भैसके भनेर घरमा भन्न लगाउँथ्यो । धुलिखेल र पोखरामा बस्दा मलाई जबरजस्ती गरेकै कारण मेरो पेटमा गर्भ रह्यो । उनी अलि भावुक हुन् थालिन् । अनि मैले फेरि सोधे त्यसपछि ….?
‘नारीको जिवन सोचेको जस्तो कहाँ हुन्छ र ? बर्मा गए, कर्मसगैँ । बुबा यहाँ हुनुभएको भए खोज तलास गर्थे । मलाई खोजी गर्ने कोही भएन । मलाई जबरजस्ती गर्ने, कुटपिट गर्न थाल्योे । कुनै उपाय लागेन् । अब कर्ममै यही लेखेको रहेछ भनेर भोग्न बाध्य भए ।
होटलमा करिब ६-७ महिना राखेपछि मलाई पोखरामै कोठा लिएर राख्यो । त्यसपछि एकदिन पोखराकै गण्डकी अस्पतालमा बच्चाको जाँच गर्न गए । २०६६ चैत २३ गते डाक्टरले बच्चाको डेट तोके । विस्तारै ऊ परिवर्तन हुन थाल्यो । कोठामा कहिले आउने, कहिले नआउन गर्न थाल्यो । त्यसपछि सोनीया काठमाडौं आइन् । आफन्तकोमा बस्न थालिएन् । काठमाडौंको प्रसूती गृहमा उनको चैत्र २५ गते छोरा जन्मियो ।
छोरा जन्मिएसगैँ उनी काठमाडौमा आफन्तकोमा बस्न थालिन् । करिब ४-५ महिना काठमाडौंमै कसिन् । उनी भन्छिन्–‘ म काठमाडौं आएको लामो समय हुँदा पनि लिन आएन । सम्पर्क विहिन भयो । फोन स्विचअफ थियो ।’
म झन् उत्सुक भए त्यसपछि ……??
त्यसपछि ऊ नआएपछि मैले उसलाई खोज्न धेरै कोसिस गरे । पोखरामै चिनेजानेको एक जना मजदुर संघका अध्यक्ष थिए । उनलाई फोन गरे । जसरीनी सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्छु भने । उनले स्याङ्जाका माओवादीका इन्र्चाजलाई फोन गरेछन् । त्यहाँबाट उसलाई पत्ता लाग्यो । त्यो मान्छे उसैको साथि रहेछ ।
म ३÷४ महिनाको छोरो च्यापेर पोखरा गए । पोखराबाट हामी ४ वटा बाइक लिएर पोखराको घरबेटी, त्यो मजदुर संघको अध्यक्ष लगायत हामी स्याङ्जा गयौं ।
स्याङजा बजारसम्म उसको ठूलो बाबु र आमा लिन आए । त्यो दाईले सबै स्याङ्जाका माओवादीका इन्र्चाजलाई भनेका रहेछन् ।
सासुले के गर्ने गल्ती गर्यो अब दुःख गरेर खानुपर्छ भनिन् ।
सोनियाको श्रीमानको घर गाउँमा रहेछ । ४÷५ महिनाको बच्चा च्यापेर उनी स्याङ्जा पुगेकी थिइन् ।
त्यही साँझ सोनीया र बच्चालाई घरमा भित्राए । अध्यारो रात थियो । त्यहि मध्येकी एक महिला घुकु घुक रुदैँ थिइन् ।
सोनीयालाई थाहा थिएन् को, किन रोहि रहेको छ । भोलिपल्ट मात्रै थाहा भयो । ति रुने महिला उसकै श्रीमानको पहिलो श्रीमती रहिछिन् ।
उनी भन्छिन्–‘मलाई खल्लो लाग्यो । म कसैको सौता भएर आएको रहेछु । आफूले आफूलाई धिकारे । उसको ८÷९ वर्षकी छोरी पनि थिइन् । ’
मलाई जिज्ञासा झन् बढ्न थाल्यो त्यसपछि …. ?
त्यसपछि उपाय थिएन । मैले मिलेरै बस्ने सोच बनाए । जेठि श्रीमती पनि पीडामा रहेछिन । श्रीमानले रक्सि खाएर सधँै कुटपिट गर्दारहेछन् । अति नै भएपछि बेलाबखत माइती गएर बस्ने रहिछिन् । आमा बुबाको झगडाले छोरीको स्कूल जाने ठेगान पनि नहुँदोरहेछ ।
सासु पनि छोराकै सपोर्ट गर्थिन् । दुई वटी श्रीमतीलाई तह लगाउन नसक्ने भन्दै कराउँथिन् । दुःख सुःख गरेर ३ वर्ष विताए । आफ्नो दुःख सुन्ने कोही थिएन ।
त्यसपछि सोनिया छोरो लिएर नुवाकोट माइत आइन् । माइतमा कसैलाई थाहा थिएन् घरपरिवारको अवस्था यस्तो छ भनेर । माइतीबाट भाईलाई लिएर उनी फेरि काठमाडौं आइन् । आफन्तले सहयोग गरे । काठमाडौंमै कोठा लिएर भाई, छोरा लिएर बस्न थालिन् ।
काठमाडौंमा अरु जानेको केही काम थिएन् । पुनः दोहोरीमै काम गर्न थालिन् ।
उनी भन्छिन्–‘त्यहाँ काम गर्दै गर्दा महिला मञ्चका साथीहरु भिजिटिङका लागि आएका थिए । उहाँहरुकै सम्पर्कमा गए । विभिन्न सिप सिके । अहिले २-३ वर्षदेखि त्यहि महिला मञ्चको कार्यसमितिको सदस्य छु । छोरो अहिले ८ वर्षको भयो । २ कक्षामा पढ्छ । दोहोरीको काम छोडिसके । श्रीमानले छोरा लैजान्छु भन्दै बेलाबखत धम्कि दिन्छन् । मैलो लैजान दिएको छैन् । कसरी दिऊ । यति दुःख गरेर हुँर्काएको छोरालाई । ’
मामाको छोरा पनि मेरो विवाह भयो भन्ने थाहा पाएपछि अहिलेसम्म नेपाल फर्कीएका छैनन् । मेरो विवाहको कारण नै आमाबुबा र मामाको सम्बन्ध राम्रो छैन । जारी तिर्नुपर्छ भन्दैथिए । बुबाले मिलाउनुभएछ ।’
छोराको जन्मदर्ता छैन ?
छोरा अहिले ८ वर्ष पुग्यो, तर जन्मदर्ता बनाएको छैन् । थाहा छैन बनाइदिन्छ कि दिदैँन् । छोरो लैजान्छु भन्दै धम्कि दिन्थ्यो ।
छोराको बाउसगँको सम्बन्धको मसँग कुनै प्रमाण छैन, मेरो नागरिकतामा पतिको नाममा मामाको छोराको नाम छ । अब जिन्दगीको समाधान के हो ? मलाइ थाहा छैन ।
उनी नागरिकता सच्याउनकै लागि गाउँ नुवाकोट पनि पुगिन् तर कानुनमा मामाका छोरा उनका श्रीमान छन् । नागरिकतामा उनको नाम छ । प्रतिलिपि बनाउनकै लागि डिभोर्सको प्रक्रिया चाल्नुपर्छ भन्यो तर मामाका छोरा नेपाल फर्किएका छैनन् । अब श्रीमानसँग कानूनी प्रक्रियाबाटै अधिकार लिने सोच बनाएको छु । पहिले आफू बस्ने वातारण तयार गर्दैछु । एक्लै जानुपर्यो खर्च हुन्छ ।